Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Ahlu-Sunna iyo kuwa Galmudug oo socda | Dalkaan.com
Home Warkii Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Ahlu-Sunna iyo kuwa Galmudug oo socda
Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Ahlu-Sunna iyo kuwa Galmudug oo socda
Dhuusomareeb (dalkaan) – Dagaal xooggan oo ka dhaxeeya ciidamada Ahlu-Sunna iyo kuwa maamulka Galmudug iyo dowladda oo dhinac ah, ayaa ka socda deegaanka Bohol oo waqooyi ka xigta magaalada Dhuusamareb ee gobolka Galgaduud.
Dagaalka oo goor sii horeysay oo maanta ah ku billowday Is-rasaasayn goosgoos ah ayaa hadda sii xoogeystay, waxaana wararka ay sheegayaan in la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan, sida ay sheegeen ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay.
Warar horudhac ah oo aan helnay ayaa sheegaya in dagaalka uu dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira, oo gaaraya 8 ka mid ah dhinacyada dagaalamay. Meydadka iyo dhaawacyada ayaa la geeyey magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Huurshe.
Galmudug iyo Ahlu-Sunna ayaa midna weli war kasoo saarin dagaalka.
Arrintan ayaa imaneysa ayada oo warar ay sheegayaan in ciidamada Ahlu-Sunna ay toddobaadyadii tegay dib isugu urursanayeen deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud, ayaga oo qorshahoodu yahay inay dib u qabsadaan Galmuudg.
War-saxaafadeed kasoo baxay Taliska ciidamada booliska Galmudug ayaa 27-kii bishan loogu digay hoggaanka Ahlu-Sunna “inay joojiyaan abaabulka iyo colaadda ay ka hurinayaan” deegaanada Galmudug, gaar ahaan gobolka Galgaduud.
Next articleAntonio Conte oo sheegay in Thomas Tuchel uusan Aqoon Sida loo isticmaalo Lukaku
Hargeysa (Caasimada Online) – Xaliimo Biritish oo ka mid ah haweenka qurba joogta ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa iyadoo jawaab deg deg...